Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhawaaday deegaan uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow | SAHAN ONLINE
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhawaaday deegaan uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow
BAYDHABO – Wararka aan ka helayno gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaano lagu tuhun yahay in uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa dhawaan laga saaray liiska shaqsiyaadka sida weyn ay u dooneysay dowladda Maraykanka iyadoona ka laabatay lacagtii la dul-dhigay madaxiisa oo gaaraysay 5-milyan oo dollar.
Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa u sheegay Idaacada VOA in ay ka war heleen in Al-Shabaab ay baadigoobayaan Abuu Mansuur,wuxuuna xusay in deegaano ku dhow dhow Xudur ay ka jirto xiisad.
Maxamed Macalin ayaa sheegay in Al-Shabaab ay gaaf wareegayaan goobaha aanay ku sugnayn dowladda oo la tuhunsan yahay in uu joogo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Waxaa maqalnay in Shabaab meelaha uu ka ag dhow yahay halka uu joogo Mukhtaar Roobow ay marayaan, dhaq dhaqaaq iyo abaabul ay sameynayaan waa naloo sheegay, balse wax aan hubno ma ahan inay weerar ku yihiin”ayuu yiri Maxamed Macalin.
Waxa uu sheegay sidoo kale ineysan wax xiriir ah ka heyn Abuu Mansuur isla markaana aanay waxba kala socon wadahadallada la sheegay iney socdaan.
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa la sheegay in ay ilaalo ka hayaan maleeshiyaad boqolaal gaaraya kuwaasoo la sheegay in ay heyb yihiin.